October 2019 – Page 2 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- DFS oo mushaarkeeda bisha October ugu deeqday Dadka ku barakacay fatahaada Baladwayne.
Madaxweynaha JFS, Guddoomiyeyaasha Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare iyo R/wasaaraha Dalka ayaa mushaharaadkoodi Bisha Oktoobar ugu deeqay dadka Soomaaliyeed oo ay fatahaaduhu saameeyeen, waxaana lagu wareejin doonaa Guddiga Gurmadka. HALKAAN [Read More]
DEG DEG:Xasaanad Ka Qadida Iyo maxkamada Lagu oogey Xildhibaan Cawil daad.
October 30, 2019 marqaan 3
Wararka Kasoo baxaya Magaalada Garoowe ayaa waxaa ay sheegayaan in Mudanayaal katirsan Barlamaanka Puntland ay kulan deg deg ah ka leeyihiin Qoraalka ka xeer Ilaalinta Guud ee Puntland u gudbisay [Read More]
Itoobiya oo qabatay Saraakiil Ka Tirsan Jabhada Suldaan Wabar ..
Warar hadda na soo gaaraya ayaa sheegaya in qaar ka tirsan Jabhadii Suldaan Wabar ay dowladda Itoobiya gacanta ku dhigtay, kadib markii ay xadkeeda u gudbeen. Ciidamadaasi ka tirsan Jabhada [Read More]
DAAWO:- Madaxa Xukuumadda Galmudug oo maanta guddi kale uga dhawaaqay Magaalada Dhuusamareeb.
Madaxa Xukuumadda dowlad Goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa waxaa uu ka hadlay fatahaada Wabiga Shabeelle oo saameyn weyn ku yeeshay dadkii ku noolaa Magaalada Baladweyne. Sheekh Shaakir oo warbaahinta [Read More]
Degdeg DAAWO:- Sh.Shariif oo kashifay sir uqarsan Farmaajo iyo Kheyre “Doorashada 2020 waxay noqon doontaa…”
October 30, 2019 marqaan 2
Madaxwaynihii Hore ee Somlia Sheekh Shariif Sheikh Axmed oo gowrdhaw loo doortay gudoomiyaha Madashada xisbiyada siyaasadeed ee Dalka ayaa khudbad uu jeediyay waxa uu kaga hadlay qiyaano uu sheegay in [Read More]
Degdeg:- Sheikh Shariif oo loo doortay Gudoomiyaha Mucaarada Somalia + Shariif Sikiin oo kuxigeen unoqonaya.
Magaalada Muqdisho waxaa Maanta lagu qabtay Munaasabad kooban oo looga dhawaaqay Madasha Xisbiyada Qaran oo ay ku midoobeen Xisbiyo dhowr ah oo dalka kajira oo ay qeyb ka yihiin Madaxweynayaashii [Read More]
DAAWO:- Xasan Shiekh “Dowladeenu dhaqaale ayay ku bixisay Taalooyinka aan micnaha lahayn Laakin dhaqaale way u wayday Gurmadka Baladwayne”.
October 30, 2019 marqaan 4
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Madaxda Dowladda Federaalka ku eedeeyey inay ka gaabiyeen u gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaadaha gaar ahaan Magaalada Baladweyne. Isaga oo ka hadlayay [Read More]
Xukun Cajiib ah oo lagu riday gudoomiyihii hore ee Demada Maxaas oo lagu eedeeyay dilka ku xigeenkiisi.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay xukunno kala duwan ku riday rag gaaraya seddax ruux. Ugu horeyn Maxkamadda ayaa Cali Axmed Guure oo maqan iyo Nuur Ibraahim Mahad [Read More]
Turkiga oo noqotay dowladii ugu horreysay ee kasoo jawaabtay Dalabkii Madaxwaynaha Somalia.
Dowladda Turkiga aya noqotay dowladdii ugu horreysay ee ka soo jawaabta baaqii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee u gurmashada dadka ay sameeyeen fatahaadaha xoogan ee ka jira qeybo [Read More]
DAAWO:- MD Laftagareen oo ka sheekeeyay dhacdooyin murugo leh oo uu kusoo arkay deegaanadii uu ku fatahay Webiga Shabeele.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) ayaa boooqday deegaanada ay saameeyeen fatahaadaha ka jira deegaanada maamulkaasi. Lafta Gareen ayaa sheegay in degmada Bardaale ay tahay meelaha aad [Read More]
DHAGEYSO: Fariimo adag oo loo diray Farmaajo, lagana hadlay Arrinta Baladweyne.
Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in goor dhow uu halkaasi gaadhi doono madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) oo muddooyinkii ugu dambeeyey safaro [Read More]
AKHRISO:- Magacyada Dad badan oo wali laga baadigoobayo Gudaha wabiga Shabeele.
Kooxaha ku howlan Gurmadka dadkii ay shalay doonta la degtay ayaa sheegaya in ilaa hadda la la’ yahay 10 qof, iyada oo 11 qof oo la la’aa mid ka mid [Read More]
DAAWO:- MD Farmaajo oo sheegay in loo baahan yahay in mushaarka Dowladda la dhimo oo looga qayb galo gurmadka fatahaada.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marka hore sheegay in Wabiga uu fatahaad ka sameeyey deegaanno badna oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya,isla markaana dadka ku nool goboladaas ay u [Read More]
Meydka Ganacsade caan oo laga helay Gudaha biyaha ku fatahmay Gobolka Hiiraan.
Waxaa saakay deegaanka Shabeellow oo ku yaalla duleedka Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan laga helay Meydka mid kamid ah dadkii shalay doonta kula qalibantay fatahaada ka dhalatay Biyaha Wabiga [Read More]
Madaxweyne Deni oo Ku Dhawaaqay Puntland Ka Qeyb Qaadashada Fatahaada Baladweyne.
October 29, 2019 marqaan 2
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlayay Magaca Goleyaasha kala duwan ee Puntland iyo kan Shacabka ayaa waxaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday [Read More]
Dowlada Soomaaliya Ayaa Guul Ka Gaadhey cafinta Daynta Soomaaliya,Waxaana Aduunka isku Raacay In Laga Wada Shaqeynayo Qaabka Soomaaliya Looga Tirtiri Lahaa Dhamaan daynta Lagu Leeyahay,Taasi oo Soomaaliya Ka Caawinaysa Qaadashada [Read More]
Dad kale oo kudhacay biyaha kufatahay gobolka Hiiraan ” Dhimasho cusub oo caawa dhacday.
October 28, 2019 marqaan 0
Labo qof ayaa hada waxaa ay ku dhaceen biyaha fatahaada ee ka socdo Buunda labaad gaar ahaan xaafada Nuur xawaad ee Magaalada Baladweyne sida ay sheegeen dad goob joog ah. [Read More]
FAAHFAAHIN:- Hir-shabeele Oo Shaacisay Magacyada Mas’uuliyiintii ku Dhimatay Doontii ku Degtay Beledweyne.
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dooni saaka mas’uuliyiin ka tirsan HirShabelle kula degtay magaalada Beledweyne oo uu fatahaad ka geystay wabiga Shabelle ee mara [Read More]
VIDEO :Xog Sir Ah Qaabkii Baqdaadi Xaaskiisa Iyo saxiibkii U Fashileen halku Joogo.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo warbaahineed, shaqsigii Sirdoonka u soo bandhigay halka uu ku suganyahay hogaamiyaha ururka Daacish, ayaa waxa magaciisa lagu sheegay Maxamed Cali Sajit. Maxamed ayaa gacan weyn [Read More]
DAAWO:- Suldaan Wabar oo ku hanjabay in mayd badan laga qaadi doono G.Awdal “Wiilashiina kala baxa gobolka”.
October 28, 2019 marqaan 3
Suldaan Wabar ayaa soo rogaal celi waxaana laga filan karaa kacdoonkiisa inuu isku badalo dagaal joogto ah oo lagu qaado ciidanka Somaliland ee kusugan gobolka Awdal. Kacdoonka Suldaanka soo rogaal [Read More]
DAAWO:- Somaliland oo qirtay in duulaan lagu yahay gobolka Awdal “Dagaalkii Boorame wuxuu ahaa mid laga soo shaqeeyay”
Taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Somaliland, Sareeyo Guuto Faarax Maxamed Mirre ayaa ka hadlay Weerar Dablay hubaysan Saaka Waaberigii ku qaadeen Saldhigga dhexe ee Magaalada Boorama. Taliye ku-xigeenku wuxuu sheegay in [Read More]
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed), oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in habka xasaanad ka qaadidda saddexda mas’uul ee ugu sarreeya dowladda Puntland ay caddaalad-darro ka jirto. [Read More]